Xidhiidhka Kubbadda Cagta Somaliland Oo Soo Saaray Sharciga Iyo Xeer-Hoosaad
HomeAfricaXidhiidhka Kubbadda Cagta Somaliland Oo Soo Saaray Sharciga Iyo Xeer-Hoosaad
Xidhiidhka kubadda cagta Somaliland ayaa soo saaray sharci iyo xeer-hoosaad loogu talo galay in lagu maamulo naadiyada kubadda cagta ee Somaliland.
Sharciga oo dhamaystirani, waxa uu u dhigan yahay sidan:
B. Naadiga/koox kasta waa inay ogolaansho ka haystaan lahaanshaha kooxda XKCSL (ruqsada lahaanshaha kooxda) isla markaana bixiyaan fiiga sanadlaha ah.naadiyada heerka kowaad $100 naadiga heerka 2aad $80 bisha koowaad January sanad kasta
T. Naadiga/kooxdu waa inay bilawga sanad walba laga diiwaan geliyaa xafiiska XKCSL ciyaartoygooda ugu badnaan 30 xubnood oo kala ah ciyaaryahano, gudoomiye, G.xigeen, tababare, kaaliye tababare iyo dhakhtar.
J. Naadiga/koox kasta waa in qof kasta oo u diiwaan gashani bixiyaa fiiga sanadlaha bilawga sanad walba waana sidan.
1: Ciyaariyahan walba $10
2: Tababare/Kaaliye $20
3: Gudoomiye/ku xigeen $25
X. Naadiga/koox kasta marka ay tartan ka qayb galayaan waa inay bixiyaan khidmad lacageed, waxaana kharashkaasi xadidaya XKCSL. (Qodobkani waxa uu hirgalayaa marka uu kobco dhaqaalaha Naadiyadu)
Kh. Naadiga/koox kasta qofka ay diiwaan gashadaan la gama masixi karo diiwaanka hadii aanay jirin sababo macquul ah oo la garawsan karo
B.Naadiga/koox kasta waa inay maalinta ay ciyaar leeyihiin tababaruhu u soo gudbiyaa liiska ciyaarahanada uga qayb galaya ciyaartaasi 12:00 duhurnimo ka hor gudida maamulaysa tartanka ama XKCSL
T. Naadiga /koox kasta marka ay ciyaar leeyihiin waa inay garoonka diyaar ku ahaadaan saacad ka hor wakhtiga bilowga ciyaarta.
J. Naadiga/kooxda wakhtiga ciyaarta iman waaya garoonka waxa la sugaya ugu badnaan 15 daqiiqo, hadii ay iman waayaan waa lagu laadanayaa.
X. Naadiga/kooxda laadatay waxay yeelanaysaa 3 dhibcood iyo gool.
KH. Naadiga/ koox kastaa marka ay ciyaar leeyihiin waxa uu garoonka ku soo geli kara ugu yaraan 9 cayaartoy
D. Naadigu/kooxdu marka ay cayaar leeyihiin waxaa loo ogol yahay inay garoonka gudihiisa u soo galaan Gudoomiye, tababare, 7 ciyaaryahan oo kayd ah kuwaas oo ku labisan qalabka ciyaarta ee kooxda iyo dhakhtar wata qalabka gargaarka, hadii aanu wadan ma fadhiisan karo kursiga kaydka.
B. Tartamadu waxay u qabsoomayaan sidan:
1. Tartanka horyaalka waxaana loo tartamayaa laba is arag
2. Tartan is reeb reeb ah qaybo ah (Groups)
3. Tartan is reeb mar qudha ah (knock out)
T. Tartan kasta oo la qabanayo waxaa ka horeyn doona qori tuurka isku aadka jadwalka iyo sharcigii tartanka lagu maamulayey.
B. Naadiga/koox kastaa waa inay u soo gudbiyaan XKCSL nuqul ah xeer hoosaadkooda, Isla markaana ay u soo gudbiyaan mar walba oo ay wax ka badalaan
T.Naadiga/koox kastaa waa inay XKCSL ka diiwaan geliyaan midabka dirayskooda 1aad iyo 2aad
J.Naadiga/kooxda soo qaadata dirays aan midabkiisu u diiwaan gashanayn hadii ay kooxda kale dirayskoodu isku midab noqdo, iyada ayaa dirayska badalaysa iyadoo aan loo eegayn marti iyo marti galin.
X. Haddii ay labada kooxood soo xidhaan diraysyo aan midabkoodu u diiwaan gashanayn oo isku midab ah waxa dirayska badalaysa kooxda magaceedu danbeeyo ee martida ah.
Kh. Naadiga/koox kastaa waa inay Astaantooda, calaamada iyo cinwaanka laga la soo xidhiidhayo Naadigooda ka diiwaan galiyaan XKCSL.
B.Naadiga/koox kastaa waa inay heshiis la galaan tababaraha, kaaliyaha tababare iyo dhamaan ciyaarahanada.
T.Tababaraha iyo ciyaaryahanku waxay kooxda kaga tagi karaan arimahan hoos ku xusan
1. Hadii uu dhamaado mudada uu heshiisku ku eg yahay, iyadoo cadaynteeda la keenayo xafiiska XKCSL.
2. Hadii ay fasaxaan Tababaraha ama ciyaaryahanka maamulka kooxda ay heshiiska la galeen iyadoo mudada heshiisku aanay dhamaan iyadoo maamulka fasaxaada sababaynayo, cadaynteedana la keeno xafiiska XKCSL.
3. Hadii ciyaarahanka ay laba kooxood ku heshiiyaan inay la kala wareegaan iyadoo mudada heshiisku aanu dhamaan.
4. Hadii maamulka kooxdu ka baxo sida heshiiskooda ku cad guno ama mushahar uu tababaruhu ama ciyaariyahanku qaadanayey laga joojiyey ama la waayey mudo ugu yaraan 3 bilood waana in ay xafiiska XKCSL U soo qoraan dacwad isla markaana ay ka helaan fasaxaad inaanay kooxdaasi ka tirsanayn.
5. Ciyaaryahan kasta oo heshiiska u dhexeeya isaga iyo kooxda ay buriyaan mudada uu horyaalku socdo koox kale uma wareegi karo ilaa uu horyaalku dhamaanayo, marka laga reebo hadii aanu kooxdiisa hore u safan ciyaar ka mid ah tartanka horyaalka.
B. Hadii marka uu tartanka horyaalku dhamaado ay laba kooxood isku dhibco noqdaan waxa ay wada ciyaarayaan ciyaar kama dambays ah (Final Game)
T. Hadii ay sadex kooxood iyo wax ka badan ay isku dhibco noqdaan waxa lagu kala saarayaa ciyaar is wada arag mar ah.
J. Sidoo kale hadii ay isku dhibco noqdaan laba kooxood iyo wax ka badan marka uu tartanka horyaalku dhamaado ha noqoto hoos u dhicid heerka 2aad iyo 3aad ama u soo gudbid heerka 1aad ama 2aad waxa lagu kala saaraya ciyaar is wada arag mar ah.
X. Naadiyada /kooxaha heerka 1aad waxa hoos u dhacaya labada kooxood ee ugu dhibcaha hooseeya sidoo kale kooxaha heerka 2aad waxa usoo gudbaya heerka 1aad labada koxood ee ugu dhibcaha sareeya waxana hoos ugu dhacaya heerka sadexaad labada kooxood ee ugu dhibcaha hooseeya, sidoo kale kooxaha heerka 3aad waxa usoo gudbaya heerka 2aad kooxaha ugu dhibcaha sareeya (Qodobkani waxa uu hirgalayaa hal sano ka dib oo ka bilaabmaysa 01/01/2014)
Kh. Tartanka koobka koobabka iyo tartamada kale ee aan ahayn horyaal ama is reeb halmar ah (knock out) hadii ay isku dhibco noqdaan laba kooxood iyo wax ka badan oo isku qayb ah (group) waxa lagu kala saarayaa arimahani siday u kala horeeyan
I. Goolasha oo la kala gooyo (inta ay dhaliyeen iyo inta laga dhaliyay )saafiga u ah
II. Goolasha la dhaliyay (tixgalinta gool dhalinta darteed)
III. Kooxdii guulaysatay ciyaartoodii hore ee ay wada yeesheen
IV. Hal hal cayaar ah oo kama danbaysah kharashka ciyaartana ay bixinayaa kooxaha iyo xidhiidhku
D. Marka uu horyaalku dhamaado labada kooxood ee ugu dhibca sareeyaa waxay u dalacayaan hal darajo marka laga reebo kooxaha heerka 1aad.
B. Hadii ciyaar faynal ah ama marka la gaadho is reeb (knack out ) la kala badin waayo waxa lagu darayaa wakhtiga dheeraadka oo dhan 30 daqiiqo hadii lagu kala badin waayo waxa la laadanayaa laadka xorta ah (rigoore )
T. Hadii qodobka 7aad xarafkiisa B loo waayo wakhtiga dheeraadka ah waxa si toos ah loo laadanayaa laadka xorta ah (rigoore)
J. Hadii tartan socda nooc kastaba ha ahaadee oo aan ahayn is reeb (knok out) ama aan la gaadhin is reeb ay ku beeganto munaasibadi waxa koobka munasibadaa yeelanaysa kooxda guulaysata
X. Hadii qodobka 7aad xarafkiisa J la waayo guul wakhtiga ciyaartuna ku dhamaato barbaro waxa la laadanayaa laadka xorta ah (rigoore) ciyaartii tartankana waxa labada kooxood lagu kala qorayaa dhibco barbaro ah (min hal dhibic)
B. Hadii uu yimaado duruufo maamul ama farsamo XKCSL wuxuu xaq u leeyahay inuu wax ka badalo qaabka tartanka iyo jadwalka ama dib u bilaabidiisa, iyadoo lala tashanayo kooxaha tartanku khuseeyo.
B. Maamulka naadi/koox waxa loo aqoonsayaa shakhsiyaadka laga soo magacaabay halka laga leeyahay ama doorsho kooxdu samaysay lagu doortay hadba sida uu xeerhoosaad keedu dhigayo
T.Tababare waxa loo aqoonsan karaa shakhsiyaadka ka diiwan gashan XKCSL haystana shahaado uu diiwaan galiyay, lagana siiyay gudaha ama dibada oo la aqoonsan yahay, shakhsigii aan buuxin shuruudahaas tababare ahaan uma fadhiisan karo kursiga kaydka mana sheegan karo tababare.
B. Naadiga/kooxda dacwad lihi waa inay dacwadooda oo qoraal ah ugu soo gudbiyaan gudiga dacwadaha iyo anshax marinta XKCSL mudo 24 saac gudahood ah laga bilabo wakhtiga ay ciyaartu dhamaato kuna soo lifaaqaan dacwadaasi kharash dhan 150,000/= dacwada aan soo marin habka kor ku xusan lama tix galinayo.
T. Naadiga / kooxda hadii ay ku qanci waayaan go’aanka ay u soo gudbiyaan gudiga dacwadaha iyo anshax marinta waxa ay ka qaadan karaan ambiil dacwadaasi iyaga oo mudo 72 saac ugu badnaan ay ugu gudbinayaan gudiga ambiilka XKCSL laga bilaabo wakhtiga ay go’aanka usoo gudbiyeen gudiga dacwadaha iyo anshax marinta kuna soo lifaaqaan kharash dhan 250,000/=. Ambiilka aan soo marin habka kor ku xusan lama tix galinayo, go’aanka gudiga ambiilkuna waa kama danbays
B. Ciyaaraha dalka kama qayb gali karaan tababare ama ciyaartoy ajinabi ah hadii aan ogolaansho laga helin XKCSL kaas oo aan ka badnaan Karin naadigiiba/kooxdiiba hal (1) tababare iyo afar (4) ciyaartoy hadii aanay jirin duruufo macquul ah oo XKCSL uu ogolaaday
T.Naadiga /kooxdu waa inay heshiis la galaan tababaraha kooxda u carbiya iyo dhamaan ciyaryahanada heshiis kaasi oo noqon kara ugu yaraan lix (6)bilood ugu badnaan afar (4) sano waana in heshiiskaasi la keenaa qoraalkiisa xafiiska XKCSL hadii kalena dhaqan gal ma noqon karo.
B. Mudada uu horyaalku socdo haduu yimaado tartan dibadeed ama ciyaar saaxiibtinimo sida CECAFA,CAF ama FIFA waxa ka qayb galaya Naadigii/kooxdii horyaalka haysata iyadoo ay iska bixinayaan wixiin kharash ah ee ku saabsan safarkooda
T. Hadii duruufo awgeed aan la qaban tartan waxa ka qayb galaya Naadiga /kooxda haysata horyaalkii ugu danbeeyay
J. Naadiga/kooxda horyalka haysataa hadii ay iska bixin kari waayaan kharashka safarkaasi waxa ka qayb galaya kooxda ku xigta ee kharashkaasi iska bixin karta
B. Hadii xulka qaranka oo safar ciyaareed u baxaya awgeed Naadi / koox laga xulo tiro ciyaartoy oo aan ka badnayn 2 isla markaana tartanka horyaalka ama tartan kaleba socdo waxa waajib ku ah inay tartanka ciyaaraha ama horyaalka socda uga qayb gasho sida ku cad jadwalka tartanka
T. Hadii xulka qaranka oo tartan ciyaareed u baxaya awgeed Naadi /koox laga xulo tiro ciyaartoy oo ka badan 2 isla markaana tartan ciyaareed ama horyaalku socdo kooxdaasi waxay xaq u leeyihiin in aanay ka qayb galin tartankaasi ilaa ay u soo noqonayaan hadii aanay iyagu codsanin inay ka qayb galaan kaalintooda tartanka
J.Naadiga /kooxda ay safar ciyaareed uga maqan yihiin in ka badan 2 ciyaartoy sida ku xusun qodobka 13aad xarafkiisa T. marka ay ciyaaryahanadu u soo guri noqdaan ayay ciyaarayaan kooxdu ciyaarihii ka baaqday waxaana mudaynaya XKCSL.
B. Ciyaar kasta oo baaqata XKCSL ayaa u cayimaya maalinta ku haboon iyadoo Naadiga /kooxdu ay xaq u leeyihiin in lagu war galiyo 48 saac ka hor wakhtiga ciyaarta
Naadiga /kooxda waxay badalan karaan wakhtiga ciyaartu socoto sadex ciyaartoy iyo hal gool haye (marka laga reebo cayaaraha saaxiibtinimo).
Marka ciyaartoy dhaawacmo ma jiro cid gali karta garoonka gudihiisa amar la’aan garsoore, hase yeeshee ogolaanshihiisa ka dib waxa gali kara oo kaliya dhakhtarka waxa ka reeban inay garoonka galaan tababaraha, maamulka iyo ciyaartoyga kaydka ah
B. Iyada oo la dhiiri gelinayo ciyaarta ku salaysan guusha badan (Badinta) waxaa habka dhibcaha loo qadanayaa sidan:-
I. Badis = 3 dhibcood
II. Barbaro = 1 dhibic
III. Guul daro = 0
Qof keliya ayaa loo ogol yahay inuu tusaalayn ka bixiyo goobta farsamada (technical area) kaas oo wax u sheegaya ciyaartoyga ku jira garoonka ciyaarta isla markaana waa in uu dib ugu soo laabtaa fadhigiisa.
B. Garsooruhu waa inuu hubiyaa qalabka ciyaartoyga ka hor bilawga ciyaarta sida:-
I. Waa in garanka sare hoosta laga mariyaa surwaalka gaaban ee hoose
II. Waa in garanku leeyahay lambar la akhriyi karo lana arki karo
III. Waa in sharabaadadu ka xidhan yihiin xaga sare iskuna midab yihiin
IV. Waa inay sitaan shansho dhawr
V. Lama ogola in ciyaartoyga ay lasoo galaan garoonka gudihiisa iyaga oo xidhan silis, saacad, kaatun IWM.
VI. Waa inuu isku hubiyaa Magaca,Sawirka,Lambarka iyo qofka cayaaraya
VII. Waa In ay wacyi galiyaan ciyaartoyga ka hor ciyaarta
VIII. Waa in uu iska hubiyaa xariiqaha garoonka ,shabagyada goolasha iyo calamada .
B.Naadiga/kooxda ciyaarsiiya ciyaartoy aan waafaqsanayn sharciga waxa laga qadayaa dhibcaha ciyaarta iyo talaabada kale ee ay la noqoto gudiga dacwadaha iyo anshax marinta
T. Ciyaaryahanka ay ku caddaato in aanu waafaqsanayn sharciga ee koox u ciyaara waxaa uu mutaysanayaa ganaaxa talaabada ay la noqoto gudida dacwadaha iyo anshax marinta ee cayaaraha lagaga joojin karo.
J. Ciyaaryahanka ay ku cadaato inuu ku ciyaaro magac aanu lahayn ama lambar aanu lahayn waxa uu ganaax u yeelanayaan isaga iyo kooxdiisu ganaaxa talaabada ay la noqoto gudida dacwada iyo anshax marinta.
Qodobka 21 aad:
B. Hadii tababare ama ciyaartoy laga saaro ciyaarta fal danbiyeed uu galay awgeed oo gudidda dacwadaha iyo anshax marinta ay la noqoto in uu leeyahay ganaax intaa ka wayn waxay awood u leeyihiin in ay ku kordhiyaan ganaxaasi.
T. Hadii ciyaartoy fal danbiyeed ka baxsan ciyaarta kula kaco ciyaartoy kale ama dadweynaha, garsooraha, kaaliyayaashiisa iyo sarkaalka 4aad oo aanay arkayn garsoorku waxaa talaabo ka qaadaya gudida dacwadaha iyo anshax marinta iyagoo u cuskanayaa hadba danbiga uu galay inta uu le’eg yahay.
B.Xubanaha ka diiwan gashan XKCSL ee u kala baxa godoomiyeyaal kooxeed ,tababareyaal, garsooreyaal ,ciyaartoy IWM .waxay xaq u leeyihiin inay qoraal ku soo gudbiyaan cabashadooda , dhaliil iyo aragtiba , iyadoo aan meel ka dhac ku ahayn maamulka XKCSL , sifo sharciga waafaqsan.
B.Hadii naadi /kooxi ay diido inay sii wadato ciyaar socota ama ka dareerto garoonka amar la’aan garsoore sabab kasta ha ku timaado’e ama taageerayaashooda laga wadi kari waayo waxa laga qaadayaa talaabadan:
I. Dhibcaha oo la siiyo kooxda ka soo hor jeeda
II. Naadiga/kooxda oo la ganaaxo talaabada ay ula muuqato gudida dacwadaha Iyo anshax marinta
III. Hadii koox looga dareeray garoonku ay dhaliyeen 3 gool waxa ka yar waxa loo qorayaa 3 gool iyo sadex dhibcood oo guusha ah.
IV. Cidii masuulka ka ahayd falkaasi oo laga joojiyo ciyaaraha ama maamulka mudo hal sano ah
B. Hadii Naadi /koox ku cadaato inay sii dayso koox kale waxa laga qaadayaa talaabadan:-
I. Naadiga/kooxda wax sii daysay oo lagu ganaaxo talaabada ay la noqoto gudida dacwadaha iyo anshax marinta
II. Dibcaha ciyaartaasi oo laga soo qado 0:0 (disqualified)
III. Cidii masuulka ka ahayd oo laga joojiyo ciyaaraha ama maamulka Muddo hal sano ah
B. Ciyaartoyga laga saaro ama laga soo warbixiyo inta ciyaartu socoto ama dhamaatay mid ka mid ah falalka hoos ku xusan waxa uu mutaysanayaa ganaax ah talaabada ay la noqoto gudida dacwadaha iyo anshax marinta
I. Ku kaca fal asluub xumo ah
II. Aflagaadeeya ciyaartoy ama dadwaynaha
III. Wax yeeleeya qalabka ciyaarta ama garoonka
IV. Aflagaadeeya maamulka tartanka ama garsoorka
T. Ciyaartoyga lagaga soo waramo wakhtiga ciyaartu socoto ama dhamaato mid ka mid ah falalka hoos ku xusan waxa uu mutaysanayaa ganaax ah talaabada ay la noqoto gudida dacwadaha iyo anshax marinta.
I. Laad ula kac ah ciyaartoy kale
II. La dagaalan ciyaartoy ama dadwayne
III. La dagaalan garsoore ama maamulka tartanka.
B. Tababaraha ku kaca falalka ku xusan qodobka 25aad xarafkiisa B iyo T waxa uu mutaysanayaa ganaax ah talaabada ay la noqoto gudida dacwadaha iyo anshaxa marinta
T. Tababaraha ama ciyaartoyga lagaga soo war bixiyo ama laga saaro iyadoo la ciyaarayo ciyaar saaxiibtinimo ama tijaabo falalka ku xusan qodobka 25aad xarfihiisa B&T waxaa loo cuskanayaa sharciga ku xusan qodobkaas
B. Ciyaartoyga qaata kaadhka ganaaxa ee ka bixida ciyaarta (red card) waxa uu fadhiyayaa ciyaarta laga saaray maahee hal (1) ciyaar oo kale
T. Ciyaaryahanka qaata 2 kaadh ganaax oo digniin ah (yellow card) laba ciyaarood oo ka mid ah hal tartan waxa uu fadhiyayaa ciyaarta ugu soo horaysa ee ay kooxdiisu yeelanayso, marka laga reebo marka loo soo gudbo wareeg labaad (sem-final) oo ay baaba’ayaan kaadhadhka ganaaxa ee digniinta ah (yellow card)
J.Tartanka horyaalka kaadhadhka ganaaxa ee digniinta ah (yellow card ) waxay baaba’ayaan marka loo soo gudbo isa raga 2aad .
X. Hadii ciyaaryahan hal ciyaar la siiyo kaadhka ganaaxa ee digniinta (yellow card) hadana lasiiyo kaadhka ganaaxa ee ka saarida (red card) waxa loo diwan galinayaa ganaaxa danbe.
KH. Ciyaaryahanka ciyaar hore la siiyay kaadhka ganaaxa ee digniinta (yellow card) hadana la siiyo ciyaar kale kaadhka ganaaxa ee ka saarida (red card) kaadhka hore waa uu diiwaan gashanaanayaa marka uu ka soo noqdo ganaaxaasi (red car) ah marka laga reebo hadii aan la gaadhin wakhtiga uu baaba’ayo sida ku xusan qodobka 26aad xarfaha T&J.
B. Ciyaarayahanka dhaawac ka soo gaadho ciyaar tartan, mid saaxiibtinimo, mid tijaabo ah ama tababar waxa ay wax yeelada soo gaadhay u taalaa kooxda uu ka tirsan yahay
T. Ciyaaryahanka dhaawac uu ka soo gaadho ciyaar tartan, mid saaxiibtinimo, mid tijaabo ah ama tababar ee ciyaaryahan ama qof kale ugu gaysto si badheedh ah waxa ay wax yeeladaasi u taalaa cida gaysatay, Marka uu caddeeyo garsooraha dhexdhexaadinayey ama gudida dacwadaha iyo anshax marintu.
B.Garsooraha ku kaca falalkan hoos ku xusan waxa uu mutaysanayaa ganaax ah talaabada ay la noqoto gudida dacwadaha iyo anshax marinta,
I. Gacan ka hadal , candhuuf tufid ama aflagaado kula kaca ciyaartoy ,tababare ,taageerayaal IWM
II. Ku caddaato inuu laaluush qaatay
III. U eexda koox si badheedh ah
IV. Ku dhex milma kooxaha , ciyaartoyga ama taagerayaasha ,
V. Ku caddaato inuu ku hadlo erayo uu ku taagerayo koox iyo wixii la mid ah
VI. Ku caddaato inuu maamulka kooxaha iyo ciyaartoyga kala sheekaysto hawshiisa ama maamulka tartanka.
VII. Ka soo bixi waaya shaqadiisa xag aqooneed ama adkaysi
VIII. Saxaafadda ka dhiibta fikirkiisa sida ay ula muuqato natiijada cayaartii uu isagu dhexdhexaadinayey.
B. XKCSL waxa uu fulinayaa siyaasada iyo falsafada wasaaradda dhalinyarada iyo Sportiga.
T. Wixii sharcigani aanu xusin ee aan ahayn sharciga caalamiga ah waxa go’aan ka gaadhaya gudida fulinta XKCSL.
J. Sharciga wax ka badalkiisa iyo kaabidiisa waxaa xaq u leh XKCSL, iyadoo lala tashanayo maamulka kooxaha heerka 1aad, inta ay dhismayaan maamulka kooxaha heerka 2aad iyo 3aad
X. Qiyaasta danbiyada kordhintooda iyo saamaxaadooda waxa awood u leh labada gudi ee XKCSL oo kala ah gudida dacwadaha iyo anshax marinta iyo gudida ambiilka
KH. Fasiraada iyo ujeedooyinka sharcigan waxa xaq u leh XKCSL
D. Wixii aan xeerkan ku cadayn ee sharci ah waxa loo cuskanayaa FIFA, CAF, CECAFA.
A. Abaal marinta naadiyada /kooxaha tartanka horyaalka A&B
I. Kaalinta kowaad hal koob oo weyn iyo biladaha dahabka ah
II. Kaalinta labaad hal koob oo yar iyo bilahada lacagta ah
III. Kaalinta sadexaad biladaha marta ah
B. Abaal marinta naadiyada/ kooxaha koobka koobabka A&B
I. Kaalinta kowaad hal koob oo wayn
II. Kaalinta labaad hal koob oo yar
C. Abaal marinta tartanka ciyaaraha gobolada
I. Kaalinta koowaad hal koob oo weyn iyo bilado
II. Kaalinta labaad hal koob oo yar iyo bilado
A. Abaal marinta shakhsiga ah ee tartanka horyaalka A&B
I. Cayaartoyga ugu goolasha badan kab dahab ah ama lacag
II. Cayaartoyga ugu ciyaarta fiican kubad dahab ah ama lacag
III. Gool hayaha ugu fiican lacag
IV. Tababaraha ugu fiican shahaado sharaf
V. Garsooraha ugu fiican shahaado sharaf
B. Abaal marinta shakhsiga ah ee tartanka koobka koobabka A&B
I. Cayaartoyga ugu goolasha badan lacag
II. Cayaartoyga ugu ciyaarta fiican lacag
C. Abaal marinta shakhsiga ah ee ciyaaraha gobolada
IV. Tababaraha ugu fiican shahaado sharaf iyo lacag
V. Garsooraha ugu fiican shahaado sharaf iyo lacag
NB: Abaal marinta shakhsiga ah ee tartamada ciyaaraha kala duwan haddii laba ciyaartoy iyo ka badan ay isku goolal noqdaan (is leekaadan) waxaa abaal marinta gool dhalinta ku guulaysanaya ciyaartoygii ugu horeeyay ee dhaliyay tirade goolasha is-leekaaday (rigooraha ciyaarta gudaheeda ah waa loogu tirinayaa gool dhalinta )
A. Balamaha iyo ilaalinta wakhtiga
I. Naadiga/kooxda xumaysa , goysa ,ilaalin wayda balamaha iyo wakhtiga la kulmida XKCSL waxay mutaysan doonaan mid ka mid ah qodobada hoos ku xusan:-
a) Digniin qoraal ah
b) Digniin qoral ah oo kama danbays ah
c) Ganaax lacageed oo dhan ugu yaraan 200,000/=
d) Ka joojin tartan ama wax kale oo ay xaq ugu lahaayeen XKCSL
A. Xubin kasta oo ka diiwaan gashan XKCSL xaq uma laha haddii ay wax ka tabato XKCSL in ay cabashadeeda ku gudbiso saxaafada ka hor inta aanay qoraal cabasho ah u gudbin XKCSL oo xidhiidhkuna aanu uga soo jawaabin.
B. Hadii naadiga/kooxda/shakhsiga ka diiwaan gashan XKCSL uu cabashadiisa ku gudbiyo saxaafadda iyada oo aanu soo marin sida uu dhigayo qodobka 34aad firqadiisa A , waxa uu mutaysan doonaa inuu waayo ka mid noqoshadii xidhiidhka ee uu ka diiwaan gashanaa
A. Hadii naadigu/kooxuhu ay caadaystaan kooxaysi ama is bahaysi ka baxsan xeer hoosaadka u deggan XKCSL waxay waayayaan qodobadan hoos ku xusan
a) Waayida xubinnimada XKCSL
b) Ganaax culus oo lacageed
Kala xadaynta ciyartoyga
Naadiyada heerka 1aad sanadka 2014 waxay ka qayb galayaan tartanka ciyaaraha gobolada , hadii 2015ka la qaban waayo tartabka horyaalkana way ka qaybgalayaan .lakiin hadii 2015 la qabto horyaalka nadiyada heerka 1aad kama qayb galikaraan tartanka ciyaaraha gobolada 2015ka, siiba waa hadii dhinaca naadiyada laga waayo kharashkii uu ku qabsoomayay horyaalku .
a) Ciyaartoy u saftay naadiyada heerka koowaad uma safan karo ciyaaraha gobolada iyo naadiyada heerka labaad
b) Cayaartoy u saftay xulalka gobolada uma safan karo ciyaaraha degmooyinka
c) Ciyaartoyga xulka qaranka Somaliland waxa kaliya ee laga xulayaa waa ciyaartoyga naadiyada heerka koowaad
d) Jouniyer ka xulka qaranka iyagana waxa laga xuli doonaa naadiyada heerka 1aad
NB: Way dhici kartaa in si toos ah ciyaartoy farsamadiisu sarayso (high quality technique) looga xulo ciyaaraha gobolada si uu u galo xulka qaranka.
A. Xubin kasta oo ka mid ah XKCSL waxaa ku waajib ah
a) Ilaalinta sumcadda iyo karaamada xidhiidhka
b) Bixinta qaadhaanka xidhiidhka ee sanad laha ah
Hadii xubinta laga waayo qodobka 37aad ee kor ku xusan wuxuu waayayaa ka mid ahaanshaha xubinnimada XKCSL ha noqdo ciyaartoy, tababare, garsoore, maamulka naadiyada iyo madaxda xidhiidhkaba
• Ciyaartoy kastaa ma badali karo lambarka uu ku ciyaaray ee loo diiwan galiyay inta lagu gudo jiro tartan ciyaareedka gudihiisa.
Cayaar kasta waa in labada tababare ee labada kooxood ee wada cayaarayey ay isa salaamaan marka cayaartu dhammaato nooc kasta oo ka mid ah tartamada XKCSL
Haddii tababaraha kooxdiisa laga badiyey ama ka kooxdiisu badisay uu salaami waayo tababaraha kale waxaa lagu ganaaxi doonaa tallaabo kasta oo ay la noqoto gudida Dacwaha iyo Anshax marinta.
Shabaga garoonka waxaa gudaha u galikara oo loo ogol yahay oo kaliya
A. ciyaartoyga labada kooxood
B. garsoorka ciyaarta
C. gudiga tartanka
E. ciidanka police ka
Axmed Maxamed Shire (Sacad) C/laahi Khayre Cawaale
Xoghayaha XKCSL Gudoomiyaha XKCSL
Maxamed Nuux Jibriil
Agaasimaha waaxda ciyaaraha